Media Education – Media Kurakani
पत्रकारिता विषयमा थेसिस लेख्दै हुनुहुन्छ? प्रेस काउन्सिलले दिँदै छ छात्रवृत्ति
January 7th, 2016 Media Kurakani Media Education No Comments
के तपाईँ पत्रकारिताको विद्यार्थी हुनुहुन्छ? कम्तिमा द्वितीय श्रेणीमा एमए प्रथम वर्ष उत्तीर्ण गर्नुभएको छ? तपाईँ पत्रकारिता विषयमा सोधपत्र (थेसिस) लेख्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? हो भने तपाईँका लागि एउटा मौका छ, प्रेस काउन्सिल नेपालले एमए पत्रकारितामा थेसिस गर्न चाहने विद्यार्थी मध्येबाट केहीलाई सोधपत्र लेखन छात्रवृत्ति दिँदै छ। पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने निकाय…